OIC ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်အရေးအဆိုပြုချက် ကုလလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီလက်ခံအတည်ပြု | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ကြွက်ထောင်ချောက် နှင့်နိုင်ငံအန္တရာယ်
မလေးရှားနိုင်ငံက တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့…မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိခြင်း… »
OIC ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်အရေးအဆိုပြုချက် ကုလလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီလက်ခံအတည်ပြု
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့မှာ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီ (UN HRC )အစည်းအဝေးမှာ OIC (အစ္စလာမ့်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့)က တင်သွင်းတဲ့ “ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်နဲ့ ကျန်လူနည်းစုတို့ရဲ့ လူ့အခွင့်ရေးအခြေအနေ”ခေါင်းစဉ်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ကို အတည်ပြုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။
အိုအိုင်စီ(OIC)ကိုယ်စား ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက အရေးကြီးအဆိုပြုတင်သွင်းတဲ့ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို မဲခွဲစရာမလိုဘဲ ကုလလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအများစုရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ အတည်ပြုလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကုလဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က စနစ်တကျ ကျူးလွန်ထားတဲ့ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ရှုတ်ချလိုက်ပြီး မြန်မာအစိုးရကို မြန်မာနိုင်ငံထဲက ရိုဟင်ဂျာအပါအ၀င် လူအားလုံးရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အလားတူ မွတ်စလင်တွေအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား၊ မျိုးနွယ်ခွဲတွေနဲ့ ဘာသာစကားကွဲပြားတဲ့ လူနည်းစုတွေကို အမုန်းထား ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ၊ အထူးသဖြင့် မွတ်စလင်တွေကို လူသိရှင်ကြား မုန်းတီးရေးလှုံ့ဆော်နေတာတွေကို အစိုးရအနေနဲ့ အထူးကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက် အပြစ်ဒဏ်မခံရဘဲ လွတ်မြောက်နေမှု၊ အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်ရေးဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာလူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်တဲ့ အမှုအားလုံးကို ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့အတူ အဆုံးသတ်ဖို့ အစိုးရကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအ၀င် တခြားသူတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်တာနဲ့ လူကုန်ကူးတာ စတဲ့ သူတို့ကို ပိုမိုအားပျော့ချည့်နဲ့စေမယ့် ပြဿနာတွေရဲ့ အခြေခံရင်းမြစ်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့် ကာကွယ်ပေးဖို့၊ ဘာသာတရားအားလုံးရဲ့ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ရာ အဆောက်အဦးတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အစိုးရကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မွတ်စလင်တွေအပါအ၀င် မြန်မာပြည်အနှံ့က ဒုက္ခသည်အားလုံးကို နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းကို ကြားခံထားပြီး နိုင်ငံတကာဥပဒေကို လက်ကိုင်ပြုကာ ဆောင်ရွက်ဖို့၊ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအတွက် နိုင်ငံသားအခွင့်ရေး အပြည့်အ၀ခံစားနိုင်ရေး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်ဖို့ ကုလဆုံးဖြတ်ချက်က အလေးအနက် တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ကုလဆုံးဖြတ်ချက်က မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ထိခိုက်ခံပြည်သူအသိုင်းအ၀ိုင်းကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ပြည့်ပြည့်၀၀ဖြည့်စည်းပေးနိုင်ရေး ခွင့်ပြုဖို့နဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် ထိခိုက်ခံဒေသတွေကို အကူအညီဖြန့်ဝေပေးရေးအတွက် အစိုးရအာဏာပိုင်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကြား သဘောတူညီထားပြီး လက်တွေ့အကောင်ထည်မဖော်ဆောင်တာတွေကို ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
အထက်ပါ ကုလလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အသွင်ကူးပြောင်းစ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်သားတစ်ပိုင်းအစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် ကျန်ဒေသတွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေ၊ စစ်ဘေးဒုက္ခပြဿနာတွေကို အစိုးရက လက်တွေ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများက ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ မုန်းတီးမှုကို ဦးဆောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီး ဘာသာတရားများအကြား ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ မုန်းတီးရေးနဲ့ အကြမ်းဖက်လှုံ့ဆော်သူတွေဟာ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူခံရတာမရှိတဲ့အချက်ကိုလည်း အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်က ထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကုလလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာတော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မတူညီတဲ့ ဘာသာကိုးကွယ်သူများအကြား တည်ရှိနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် ကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိုအိုင်စီရဲ့ အဆိုပြုချက်အားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
Source : OIC news/ MOI
THE WHOLE “ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ၏ (၂၉) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး” vote against Myanmar.
July3at 9:46pm · Edited ·
၁။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ၏ (၂၉) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးအဖွဲ့ (အိုအိုင်စီ) မှ တင်သွင်းသည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သော အဆိုမူကြမ်း တစ်ရပ် ကို (၃-၇-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ချမှတ်ခဲ့သည်။
၂။ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်သော အချုပ်အခြာအာဏာ ပိုင်မှုကို ထိပါးရာရောက်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့် အရေးအခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲချက်များ ပါဝင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်း ကျရောက်သည့် ကိစ္စများအား ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု ရှိနေခြင်းအား အထင်အမြင်လွဲမှားစေမည့် ဖော်ပြချက်များ ပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်မ ကျသော ဆောင်ရွက်ချက် တစ်ရပ်သာဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးကိစ္စအ တွက် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီကို အသုံးချ၊ အမြတ်ထုတ်မှု တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
၃။ ထို့အပြင်၊ ယင်းအဆိုမူကြမ်းသည်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မတူညီသော ဘာသာကိုးကွယ် သူများ အကြား တည်ရှိနေသည့် ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် ညီညွတ်မှုကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် ကြိုးပမ်းမှု တစ်ရပ် အဖြစ် သုံးသပ်ရရှိသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာစဉ်းစားပါက ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများအကြား ရှင်သန် ဖြစ်ထွန်းနေပြီး၊ ဝိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်းသွားရမည့် သဟဇာတဖြစ်မှုကို ထိခိုက်စေရန် အစပျိုးမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ရာ သတိပြုရမည့် ခြေလှမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
၄။ သို့ဖြစ်ရာ ယင်းအဆိုမူကြမ်းအား လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၌ စဉ်းစားဆောင် ရွက်ရာတွင် ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ် စားလှယ်က အဆိုမူကြမ်း တွင်ပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံက လက်မခံသည့် အသုံးအ နှုန်းကို လည်းကောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ အပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ချင်းစီကို လည်းကောင်း၊ ပြင်းထန်စွာကန့် ကွက်လျက်ပယ်ချခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အိုအိုင်စီ ၏ အဆိုမူကြမ်း တစ်ရပ်လုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ပြောကြားခဲ့သည်။
၅။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်သူများ၏ လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်ရရှိရေးနှင့် ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ရေးတို့အတွက်၊ နိုင်ငံအတွင်း မတူညီသည့် ယုံကြည်မှုများနှင့် လူများအကြား ကွဲပြား ခြားနားမှုများကို လက်ခံလျက် သဟဇာတရှိရှိဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆက်လက် အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးကို ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃ ရက်
This entry was posted on July 5, 2015 at 10:32 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.